Caadooyinka Soo Iibsiga ee Dukaamaysiga | Martech Zone
Caadooyinka Pre-Iibsiga ee Dukaamaysatada
Arbacada, Juun 13, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Habeenkii kale waxaan watay gaadhigayga dukaameysiga oo buuxa oo ku yaal Apple.com oo wata nooc cusub MacBook Pro leh muuqaalka isha Farta ayaa si macno leh u dul istaageysa badhanka iibsiga. My MacBook Pro hadda waa mishiin weyn laakiin dhab ahaantii waxay bilaabaysaa inay dareento gaabis marka loo eego dhammaan Mac-yada cusub ee soo baxaya. Waqtigaas, waxaan daawanayay show telefishan oo sharaxaya MacBook Pro waxaanan ku jiray iPad-kayga. Markii aan bilaabay inaan ka fekero caadooyinkayga wax ku iibsashada ee internetka, taasi waxay u muuqataa inay tahay wax caadi ah… Waxaan daalacanayaa oo aan wax iibsanayaa inta aan daawanayo telefishanka ama aan ka nasanayo shaqada.
Laga soo bilaabo Milo Infographic: Daraasad ay sameeyeen kooxda elektaroonigga ah oo ka wakiil ah Hay'adda Maxalliga ah ayaa lagu ogaaday in macaamiisha maanta ay soo saareen dabeecado iibsi hore oo u gaar ah - xitaa markay wax ka iibsanayaan gudaha - oo ay keeneen adeegsiga tikniyoolajiyadda iyo aaladaha moobaylka. Waxaan eegeynaa caadooyinka dukaamaysiga kahor ee macaamiishan maxalliga ah iyo kuwa guurguura.
Fiiro gaar ah: Anigu ma iibsanin MacBook Pro. In kasta oo aan runtii qiil ugu heli karo shaqada, haddana kuma jirno booska aan lacag ku qaadan karno qalabka xilligan. Waxaan si dhaqso leh ugu tuuray furka ipadkeyga waxaanan ku noqday hamigeygii. (Waxay kaloo caawisay inaysan halkaan joogi doonin dhowr toddobaad haddaan iibsan lahaa).
Tags: caadooyinka iibsashadacaadooyinka ecommercecaadooyinkainfographicipadSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaiibsiga horekiniin
Jun 27, 2012 at 2: 31 PM
Kani waa faahfaahin weyn maxaa yeelay ma ahan wax xad dhaaf ah in la fiiriyo. Qaar iyaga ka mid ah waxay leeyihiin "macluumaad" aad u badan oo iyaga ku saabsan. Uguyaraan waxay qeexaysaa waxa aan dadka usheego markasta: Waxaad tahay macaamiil runti caqli badan, waxay si joogto ah u baaraan aaladaha mobilada si ay kuu helaan, kuu helaan ikhtiyaarro kafiican, akhri faallooyinka, & helitaanka qiimaha.
PS Rajaynaynaa inaad si dhakhso leh u hesho macbook-gaas cusub!